Semalt: Inona no atao hoe fanararaotana ao anatiny? Ireo karazana tranokala vohikala nopotehina tao amin'ny tranonkala
Ny fanodinkodinan'ny votoaty dia ny famoahana votoaty ao anaty tranonkala amin'ny tanana na amin'ny alalan'ny fitaovana. Ny ankamaroan'ny webmasters sy ny mpitoraka blaogy dia miaro ny votoatiny araka ny lalàna momba ny zon'ny mpamorona, ary ny famoahana ny vaovao nangalarina ho toy ny voalohany dia heloka be vava!
Indrisy anefa fa ny tranonkala dia voasariky ny tanjona mampiahiahy sy tsy ara-dalàna toy ny sehatra indostrialy, plagiarism, ary ny fangalarana angon-drakitra. Na izany aza, ny tanjona ara-drariny sy azo itokiana ny fikojakojana ny votoaty dia ny fidirana amin'ny angona, ny fitantanana ny votoatiny, ny fifindra-monina, ny tsikombakomba fifaninanana, ny fitantanana ny lazany na ny orinasa analytics - wordpress é gratis.
Ny karazana votoaty efatra samihafa ao anaty aterineto:
Ny sasany amin'ireo webmasters sy bilaogera dia mampiasa ny votoaty avy amin'ny vohikala marobe sy bilaogy, raha jerena fa ny fampitomboana ny habetsaky ny pejy eo amin'ny toerana dia tsara ho an'ny fikarohana baolina matihanina. Ary raha ny tena izy, ny votoaty rehetra dia azo raisina ho mamaivay, fa ny karazana efatra amin'ny karazan-tsakafo madinika dia voalaza etsy ambany.
1. Famoahana sy torolàlana dizitaly:
Ireo mpamoaka finday sy ny torolàlana an-tserasera dia matetika mikendry ny mpandrindra sy mpandrindra, izay mikasa ny hanala ny votoatin'ireo tranonkala ireo ho an'ny bilaoginy manokana. mivazavaza. com izany ohatra. Ity mpamatsy aterineto iraisam-pirenena amin'ny aterineto sy tranokala an-tserasera ity dia nahazo fahombiazana goavana tato anatin'ny volana vitsy. Maro ny votoaty nakambana tao amin'ity tranonkala ity, ary ny spammers dia mitady hatrany ny fomba hanefana bebe kokoa ny pejiny. Toy izany koa, Manta no tranonkala malaza izay misy marika maherin'ny 20 tapitrisa no nisoratra anarana ho an'ny tanjon'ny marketing. Mampalahelo fa ny ankamaroan'ny votoatiny dia nopotehina, ary marobe ny bots ampiasaina ho an'ity tanjona ity.
2. Trano fonenana:
Taona maromaro lasa izay, ireo mpandraharaha ara-barotra dia nisy nanafika ny votoatin-dresaka, ary ny fitrandrahana dia nitaky azy ireo maherin'ny 10 tapitrisa dolara.
3. Ny fitsangatsanganana:
Toa ny votoatin'ny tranonkalan'ny seranan-tsambo rehetra dia efa voafafa. Ireo orinasa ireo dia tsy manome fampahalalana momba ny toerana tsara indrindra eran'izao tontolo izao fa manome tolotrasa ho an'ny mpanjifany. Ny toerana fanaovana dia dia mora voka-dratsin'ny votoatin'ny votoaty. Ny sasany amin'ireo masoivohon'ny serasera an-tserasera izay atahorana dia Kayak, TripAdvisor, Priceline, Trivago, Expedia, ary Hipmunk.Nanangana orinasam-pitadiavam-bola an'arivony tapitrisa tapitrisa izy ireo, ary matetika no voatsikera sy naverina amin'ny vohikala madinika sy bolongana ny votoatiny.
Marina fa tsy azo kitihana mora ny votoatin'ny tranonkala e-commerce, fa ny tranonkala tahaka an'i eBay sy Amazon dia mbola voasintona amin'ny famaritana ny vidin'ny vidiny sy ny famokarana vokatra.